Maitiro Ekutarisa Yako Yemunharaunda Dhairekitori | Martech Zone
Madhairekitori emuno anogona kuve ese chikomborero uye chituko kumabhizinesi. Pane zvikonzero zvitatu zvakakosha zvekuteerera madhairekitori emuno:
SERP Mepu Kuonekwa - makambani haawanzo kuziva kuti kuve nebhizinesi uye webhusaiti hazvireve kuti zvinoita kuti uoneke mumapeji ekutsvaga enjini yekutsvaga. Bhizinesi rako rinofanira kuverengerwa pane Google Bhizinesi kuwana kuoneka muchikamu chemepu yeinjini yekutsvaga peji peji (SERP).
Organic Nzvimbo - madhairekitori mazhinji akanaka kuverengerwa mukati kuti uvake yako saiti yakazara huwandu hwehukama uye kuoneka (kunze kweMepu).
Dhairekitori Referrals - vatengi uye mabhizinesi vanoshandisa madhairekitori kutsvaga zvitoro zvekutengesa, maresitorendi, vanopa rubatsiro, nezvimwewo kuitira kuti ugone kuwana bhizinesi nekunyorwa.
Nharaunda Dhairekitori Haagare Akanaka
Nepo paine mabhenefiti kumadhairekitori emuno, haisi nguva dzose zano rakakura. Heano mamwe matambudziko nezvidimbu zvemuno:
Kutengesa kunotyisa - madhairekitori emuno anowanzoita mari yavo nekukutengesera iwe kune ekutanga zvinyorwa, kushambadzira, masevhisi, uye kukwidziridzwa. Kazhinji kazhinji kupfuura izvi, zvibvumirano izvi ndezvenguva refu uye hazvina metric yekuita inosanganisirwa. Nekudaro, kunyange zvichinzwika sepfungwa yakanaka kunyorwa pamusoro pevezera rako… kana pasina munhu ari kushanyira dhairekitori ravo, hazvisi kuzobatsira bhizinesi rako.
Dhairekitori Kwikwidzana Nemi - madhairekitori emuno ane mabhajeti akakura uye ari kukwikwidzana newe chaiko. Semuenzaniso, kana iwe uri wedenga wedenga, dhairekitori renzvimbo dzemazita evapadenga vanozoshanda nesimba kuti vatore pamusoro pewebhusaiti yako. Pasina kutaura ivo vari kuzopa makwikwi ako ese padivi pako.
Zvimwe Zviratidziro Zvichakukuvadza Iwe - Mamwe madhairekitori akazara nemamirioni ezvinyorwa zve spam, malware, uye zvisina kufanira mawebhusaiti. Kana domain yako yakabatana pamapeji iwayo, inogona kukuvadza masosi ako nekukusanganisa newe iwo masosi.
Yemunharaunda Dhairekitori Management Services
Sezvo nedambudziko rese rekushambadzira kunze uko, kune chikuva chekubatsira varidzi vebhizinesi kana vamiririri vekushambadzira kubata zvinyorwa zvavo. Ini pachangu, ndinokurudzira kuti makambani agadzirise account yeGoogle Bhizinesi yakananga kuburikidza neGoogle Bhizinesi nharembozha - inzira yakanaka yekugovana nekugadzirisa zvaunopa zvemuno, kugovana mapikicha, uye kuramba uchitaurirana nevashanyi kuSERP.
Semrush ndiyo yandaifarira pachikuva yekutsvaga nekutarisa vatengi vangu 'kutsvaga injini kuoneka. Ivo zvino vawedzera zvipo zvavo muzvinyorwa zvemuno ne new zvinyorwa zvinyorwa zvekushandisa!
Tarisa Yemunharaunda Zvinyorwa Kuonekwa
Chinhu chekutanga chaungaite kutarisa zvinyorwa zvako. Pinda nyika, zita rebhizinesi, kero yemugwagwa, zip kodhi, uye nhamba yefoni yebhizinesi rako:
Semrush otomatiki anokupa iwe runyorwa rweanonyanya kubvumirwa madhairekitori pamwe nekuti marongero ako anoratidzwa sei. Mhedzisiro yacho inoputsa mhedzisiro ne:
chipo - uripo mune dhairekitori renzvimbo uye kero yako uye nhamba yefoni zviri chaizvo.
Iine Nyaya - iwe uripo mune yemuno zvinyorwa zvinyorwa asi pane nyaya nekero kana nhamba yefoni.
Kwete Present - iwe haupo mune aya ane masimba emunharaunda zvinyorwa.
Hazviwaniki - dhairekitori riri kutaurwa harina kukwanisa kusvika.
Ukabaya Govera Info, unogona kubhadhara mari yemwedzi, uye Semrush inozobva yanyoresa iyo yekupinda yezvinyorwa zvisingaonekwe mukati, inogadziridza zvinyorwa zvayinoita uko pasina iko kupinda iriko, uye ramba uchichengeta madhairekitori achigadziridzwa mwedzi wega wega.
Zvimwe Zvimiro zve Semrush Zvinyorwa Zvemunharaunda
Google Mepu Heatmap - Ona chaizvo maratidziro aunoita paGoogle Mepu zvabuda munzvimbo dzakananga bhizinesi rako. Nekufamba kwenguva, unogona kuteedzera mashandisiro awakaita iwe.
Kutsvaga kwezwi Kugadzirisa - Vanhu vari kutsvaga nezwi ravo ikozvino kupfuura nakare kose. Semrush inoita shuwa kuti zvinyorwa zvako zvakagadziridzwa kumibvunzo yezwi
Tevera uye Pindura Kuongororo - Ona wongororo dzese dzebhizinesi rako uye tora matanho akakodzera ekuchengetedza rako bhizinesi nekupindura paFacebook neGoogle Bhizinesi.
Manage Mushandisi Mazano - Ona shanduko muzvinyorwa zvako zvinokurudzirwa nevashandisi uye ubvume kana kuzviramba.
Tsvaga uye Bvisa Mabhizinesi Ekunyepera - Panogona kuve nevanyengeri vane zita rimwe chete rebhizinesi sewe pawebhu. Gadzirisa chero dzakanangana nenyaya!
Tarisa Yako Yemunharaunda Chinyorwa
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we Semrush Yemunharaunda Zvinyorwa
Tags: madhairekitori ebhizinesitarisa dhairekitori renzvimbotarisa zvinyorwa zvemunomadhairekitori emunolocal searchyemunharaunda yekutsvaga masosiyemuno seo